IHE MERE OBAMA NA CLINTON JI BỤRỤ NDỊ AKA EKPE – hoo!haa!!
IHE MERE OBAMA NA CLINTON JI BỤRỤ NDỊ AKA EKPE
Ịnglandị: Nnyocha ọhụrụ ndị ọkachamara sayensị si na mahadum Oxford mere arụtụwo aka nke mbụ ya n’akụkụ DNA mmadụ nke na-eme ka ha bụrụ ndị akaekpe ma ọ bụ ndị aka nri. Ha gosikwara na e nwere ihe jikọrọ akụkụ DNA ahụ nakwa akụkụ ụbụrụ mmadụ na-ahụ maka asụsụ.
Tupu ugbu a, ndị ọkachamara sayensị chọpụtara na kwanarị iri abụọ n’ise (10%) n’ime mmadụ nọ n’ụwa na-eme aka ekpe. Ụfọdụ ndị aka ekpe ama ama n’ụwa gụnyere ndị isiala Amerịka abụọ bụ Bil Clinton na Barack Obama.
Ha kọwara nke a n’edemede nnyocha ọhụrụ pụtara n’akwụkwọ edemede mmụta bụ ‘Brain’
Ha chọpụtara na akụkụ ụbụrụ na-ahụ maka asụsụ ka arụ na ndị na-eme aka ekpe nke pụtara na ha nwere ike kara mma n’ọrụ ọbụla banyere ikwu óké okwu.
“Nkea bụ nke mbụ ya n’ahụ mmadụ, anyị ehiwela nchọpụta na a na-ahụta aka mmadụ na-eme n’ụbụrụ ya,”Ọkammụta Gwenaëlle Douaud, onye nọ n’ogige Wellcome Centre for Integrative Neuroimaging nke mahadum Oxford kwuru.
Ha chọpụtakwara ihe jikọrọ DNA ndị ahụ na-ebute ime aka ekpe nakwa mbelata ọrịa Parkinson tinyere ọrịa schizophrenia ịdịtụ elu
Previous Post: EHIWELA ÒTÙ IGBO ‘CORPERS CONNECT’, MỊNNA
Next Post: ‘XENOPHOBIA’: ONYEAMA ZỌHIERE ỤKWỤ – UDEJI, ONOWU NA SAỤT AFRỊKA